Xukuumadda oo Shaacisay in la Xalliyey Cabashadii Ganacsatada Wax Kala soo Degta Dekedda Berbera | Dhaymoole News
Xukuumadda oo Shaacisay in la Xalliyey Cabashadii Ganacsatada Wax Kala soo Degta Dekedda Berbera
August 17, 2017 - Written by wariye999
Hargaysa (Dhaymoole)- Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Maal-gashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda Somaliland, Cumar Shucayb Maxamed, ayaa ka hadlay cabashadii ka soo yeedhay ganacsatadda badeecaduhu uga soo degaan Dekedda Berbera ee la xidhiidhay in adeega shaqo ee marsadu uu hoos u dhacay.
Iyadoo ganacstadda isticmaala Dekedda Berbera ay dhaliileen in uu jiro hoos u dhac ku yimid hawlaha shaqo ee adeegyadda Dekedda mudadda ay shirkadda Imaaraadka ee DP World la wareegtay maamulka Dekedda.
Wasiirka ganacsiga ayaa ku tilmaamay cabashadda ganacsatadda alaabooyinku uga soo degaan Dekedda in ay tahay mid la xidhiidha kala duwanaanshiyo dhinaca hab maamulka cusub ee ay ku shaqayso shirkadda DP World iyo qaabkii markii hore ay u shaqayn jirtay dekadu.
Inkastoo uu wasiirku qiray in ay jirto cabashadda ka timid ganacsatadda ee ah in alaabooyinku ay kaga xanibmaan Dekedda, balse xubno wasiirro ah oo uu isagu ka mid yahay ay Berbera u tegeen sidii dhibaatadaasi loo xalin lahaa.
“Way jirtaa cabashadda ganacsatadda, waxaanay ka cabanayaan rarkii lagu soo xidhi jiray Dekedda, maraakiibtii iyo alaabooyinkii laga soo dejin jiray ay leeyihiin xanibaad ayay naga gashay. Si aanu arrintaasi u soo xalino ayaanu Berbera ku tagnay anagoo ah saddex wasiir. Wasiirka ganacsiga, wasiirka arrimaha dibadda iyo anigoo wasiirka ganacsiga ah. markii aanu xaaladii u kuur-galanay, runtii caqabadaasi way jirtaa in adeega dekadu uu ka hooseeyo marka loo eego sidii markii hore ee ay xukuumadu maamuli jirtay. Waxaana jirta in ay imika hoos u dhacday hawshii rarista iyo rogista alaabta Dekedda ka soo degta,”ayuu yidhi wasiir Cumar Shucayb oo shalay u waramayay VOA.
Waxa kaloo uu intaas ku daray; “Sababta ay hoos ugu dhacday waa laba arrimood, midi waxay tahay dekadu waxay gashay hab maamul oo cusub, kana duwan habkii hore ee ay dekadu ku shaqayn jirtay. Taasi oo ah in laga shaqaysiinayay qaybta Selvador-ka oo ay cidi gacanta ku hayso oo xoog ku shaqaynaysay, mid aad u deg-deg badan ayaanu ahaa. Laakiin, nidaamkan cusub ee ay DP World ku shaqaynayso waxay yidhaahdaan waa mid caalami ah, waxaana dhacda mararka qaarkood in xiliyadda dabayshu dhacayso oo kale dejinta alaabta la hakiyo.”
“Markii aanu isla eegnay dhibaatadda jirta, waxaanu ku xalinay in guddi loo saaro.gudidaasina waxaa ka mid ah in wada shaqayn fiican ay yeeshaan DP World iyo shaqaalaha Dekedda, oo uu is-faham la’aani ka dhex taagan tahay.
DP World masuuliyiinteedda markii aanu waraysay waxay noo sheegeen in ay wax ka bedelayaan siday imika u shaqeeyaan. Waxaanu is-la af-garanay ganacsatadda iyo hay’adaha kale in dantu ugu wada jirto in tayadda iyo adeegga dekadu uu wanaagsanaado.”ayuu yidhi wasiirka ganacsigu.